Global Voices teny Malagasy » Frantsa: Mpianatra manerantanymitoraka blaogy an’i Parisy ao amin’ny Cité Babel · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Febroary 2010 20:42 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Vidal Nandika Candy
Sokajy: Frantsa, Fanabeazana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
Tanàna marolafy mampiantrano mpianatra avy any any ivelany mipetraka sy mianatra any amina anjerimanontolo Frantsay ny Tanàna Iraisam-pirenenan'i Parisy [Fr]. Niforona tamin'ny fotoana nanelanelana ny Ady Lehibe roa ny Cité, tao anatin'ny eritreritra handala ny fandriampahalemana izay nitsiry sy nitombo nandritra io fotoana io tany Frantsa. Naka an'eritreritra toerana iray mety hamoriana ireo mpianatra avy amin'izao tontolo izao izay hianatra any Parisy sy manome azy ireo toeram-ponenana hahafahany mifandray sy mifampianatra ireo mpanorina azy izay nifototra tamin'ny hevitra mandala ny mahaolona. Ho “sekoly ho an'ny fifandraisan'ny samy olombelona ho an'ny fandriampahalemana” io, hoy ny voalaza ao amin'ny vohikalan'izy ireo La Cité Internationale Universitaire de Paris.
Ny Tanàna Iraisam-pirenenan'i Parisy
Misy blaogy iray anoratan'ny mpianatra maro momba ireo zavatra iainany any amin'ity fiaraha-monina ity. Cité Babel  no anaran'io sehatra io, ary ao no izaràna eritreritra, fomba fijery ary zava-niainana, amin'ny teny Frantsay sy karazana tenim-pirenena maro hafa.
Misy gazety an-taratasy telo koa manana fifandraisana amin'io blaogy io ary samy azo jerena amin'ny aterineto avokoa izy ireo. Ireto gazety ireto dia novokarina ekipa iray izay mandinika ireo olana momba ny maha-izy ny olona, ireo fifandraisana, fifanakalozana ara-kolotsaina, fomba fiteny, fandikànteny, hevitra, ary fijery an'i Frantsa sy izao tontolo izao. Noho izany ny Cité Babel no fototry ny dia iainan'ny mpianatra sy ny mpiasa izay miaina izany ka lasa olom-pirenen'izao tontolo izao.
Mba hahazoana sary an-tsaina ny fiasan'ity blaogy ity, ireto misy ampahan'asa-soratr'ireo mpikambana ao amin'ilay vondrom-piaraha-monina miresaka lohahevitra isan-karazany.
Ato amin'ity lahatsoratra ity “Why Paris sucks (and why I don’t want to leave) ”[nahoana no mandroaka i Paris ( ary nahoana no tsy te-hiala aho)] i Jake Heller, mpianatra Kanadiana, no mandinika ireo foto-kevitra ananan'ireo mpianatra avy any Etazonia amin'ny fiainana any Parisy sy ny fanozongozonan'ny zava-misy iainana ao amina tanàna mihetsiketsiha sy saro-pantarina ity:
Tsy misy ifandraisany amin'ny vidim-piainana aty loatra no tena mampandany ny volako amin'ny fifanakalozana aty ; fa ny tsy maintsy hanetsenako ny elanelana misy eo amin'ny zavatra iainako sy ny andrasan'ny hafa amiko izay lasa toy ny adidy miha-mitombo (…) Rehefa misy manontany ahy momba an'i Parisy… ny marina dia tsy manontany na inona na inona amiko izy ireo izay. Ny faheno matetika avy amin'izy ireo dia ny hoe “Tsara be izao ny fiainanao any!” na hoe “Mba tantarao ahy ny momba izay Frantsay sipanao!” na raha manontany izy ireo dia efa manana valiny an-tsaina, toy ny hoe “Tahaka ny ahoana ny hatsaran'ny any?” Noho ny tsy fahafaham-pony amin'ny fiainany, dia antenainy aho hamelombelona ny nofin'izy ireo, ka – mba hisorohako ny filazana ahy ho be koretaka, sy hahazoako vali-boraigona – ny avaliko ny “fanontaniana” toy izany dia tsy maintsy ahitàna voambolana hoe “mahafinaritra,” “tsy mampino,” na “masaka be.” Ny olana dia izao, tsy azo ampitahaina mihitsy i Parisy iainana andavanandro sy i Parisy nofinofisin'ny maro amin'ny Amerikana Tavaratra (Fanamarihana: Azoko tsara fa maro amin'ireo Amerikana Tavaratra no mieritreritra ny “tontolo marina” any araka ny asehon'ny série tele fa tsy araka ny tena zava-misy, ary izay no tena manamafy ny hevitro.)
Abdelkader, mpianatra (Palestiniano-)Frantsay no manoratra momba ny fomba fijerin'ireo haino aman-jery Frantsay  amin'ny fifandirana manahirana any Gaza [Fr]. Raha miresaka momba ny halavam-potoana iresahana ity fifandirana ity tamin'ireo haino aman-jery lehibe izy (vaovaon'ny fahitalavitra Frantsay no resahina eto) dia fanontaniana sy hevitra mafonja no apetrany. Noho ny fahatongavan'ny tsingerin-taona voalohan'ny nandarohana baomba an'i Gaza, dia asongadin'ity mpianatra ity ny finiavan'ny olona tsy hiraharaha toko (iray manontolo) ny zava-niseho izay manakorontana ny fiainan'ny Palestiniana sy ny Isiraeliana:
Raha ny hita, mbola manan-danja noho ireo Palestiniana 1.8 tapitrisa voahidy any amin'ny tanàna tsizarizarin'i Gaza ny fahorian'i Berlusconi sy Johnny Halliday (…) eny fa na amin'ireo liam-pivoarana izay nanohana an'i Palestina aza tamin'ny voalohandohan'ny 2009 aza, dia tsy manan-danja noho ny sakafom-pianakaviana ny “apartheid” sy ny “ghettoisation” mihatra amina vahoaka iray manontolo izany(…)
Indrisy ry Palestina! Izao hariva izao, mbola mitomany ho anao indray ny maroanisa tsy miteny, abotsin'ny firehak'ireo mpisoloky sy mpihatsaravelatsihy avy amin'ny haino aman-jery sy ireo mpiara-miasa aminy, izay te-handrebireby antsika amin'izay zavatra tsipahiny ihany tsy hahakenda azy ireo, ny ranomason'ny maroanisa tsy miteny. Oadray, adinoko… mirary 2010 sambatra!
Mandritra izany i Chen Miao, avy any Sina, miresaka momba ny sary iraisan'ny vahoaka Sinoa ao amin'ny lahatsoratra nosoratany, “Saro-kenatra ve ny Sinoa ?” [Fr/Ch]
Indray andro, nisy namako iray monina aty amin'ny Cité Universitaire, niteny tamiko hoe: “mieritreritra aho fa saro-kenatra, mitandritandrina ary mikombona ny Sinoa.” (…) Tsy ny namako ihany no mieritreritra izany. Na dia tsy nieritreritra ny hitsikera aza izy, misy tsy fifankahazoana ihany ao.
Voalohany –ary tsy izahay ihany no mahatsapa izany fa tera-tany vahiny maro any Frantsa- toa manirery izany izahay rehefa lavitra ny tanindrazana (…), Afaka manaporofo ny Sinoa fa manam-panahy sy malala-tsaina. Raha avy amina firenena “saro-kenatra” izany, dia misy “charme” manitona ao anatin'ilay hasarotan-kenatra, mifototra amina kolotsaina lalimpaka, matanjaka, madio ary mahery! Tsy mikombona amin'izao tontolo izao intsony ny Sinoa. Aty ivelany izao izahay ary mitodika amin'ny vazantany efatr'izao tontolo izao, anananay ny hevi-panavaozana sy ny finiavana tsara.
Malalaka sy mampientanentana ny lohahevitra sy ny hevitra ao. Azo antoka ity fa fiaraha-monina iraisam-pirenena tonga saina amin'ny fivelaran'ny tany, ary hitan'ny olona fa mihamifanakaiky hatrany izy ireo isan'andro. Isaky ny lahatsoratry ny blaogy Cité Babel, dia natao ho hita sy hiadiana hevitra izay mipoitra. Na inona tenim-pirenena, fiaviana na fianarana “akademika” vita, ny blaogin'ny Cité Babel no sehatra ahafahan'ireo mpianatra manandra-peo sy maneho ny fomba fijeriny manokana ny kianja iraisam-pirenena izay lazaina ho iray amin'ireo marokolontsaina indrindra, maro karazany ary mifangaro indrindra manerana izao tontolo izao: ny Parisin'ny taon-jato faha-21.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/02/26/4998/
 ny Tanàna Iraisam-pirenenan'i Parisy : http://www.ciup.fr/
 Why Paris sucks (and why I don’t want to leave): http://citebabel.wordpress.com/2010/01/26/eng-why-paris-sucks-and-why-i-don%E2%80%99t-want-to-leave/
 fomba fijerin'ireo haino aman-jery Frantsay: http://citebabel.wordpress.com/2010/01/26/gaza-we-shall-not-go-down/
 Saro-kenatra ve ny Sinoa: http://citebabel.wordpress.com/tag/multiculturalisme/